Meelaha loogu safro lamaane ahaan ee Spain: laga bilaabo Granada ilaa Soria | Wararka Safarka
Meelaha loo safro lamaane ahaan ee Spain
Luis Martinez | | Magaalooyinka Spain, Jacayl
Way badan yihiin meelaha loogu safro lamaane ahaan ee Spain. Waa magaalooyin leh aura jaceyl. Intaa waxaa dheer, sida caadiga ah waxay leeyihiin taariikh kun sano ah iyo taallo tiro badan. Laakiin, dhammaan ka sarreeya, waxay ka buuxaan halyeeyo, qaar badan oo iyaga ka mid ah, si sax ah, oo ku saabsan jacaylka aan faraxsanayn.
Meelo badan oo sidan oo kale ah ayaa Spain ku yaal oo aanay suurtogal ahayn inaan kuu sheegno dhammaantood. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kuu xaqiijineynaa, haddii aad booqato kuwa aan soo jeedineyno, inaadan ka shallayn doonin. Waxaad ku qaadan doontaa joogis cajiib ah lamaanahaaga oo labadiinaba aad ku raaxaysan doontaan a xusuus xusuus leh. Laakin, iyadoon xamaasad dheeraad ah lahayn, waxaanu ku tusi doonaa qaar ka mid ah meelaha aad ugu safri karto lamaane ahaan gudaha Spain.
1 Shan meelood oo aan laga adkaan oo lagu safro lamaane ahaan gudaha Spain
1.3 Salamanca, meel kale oo lagu safro sida lamaane oo Spain ku fiican
Shan meelood oo aan laga adkaan oo lagu safro lamaane ahaan gudaha Spain
Waxaan bilaabi doonaa socdaalkayaga meelaha aan ugu safri karno lamaane ahaan iyada oo loo marayo Spain ee Andalusia taariikhiga ah ka dibna aan u dhowaano meelo kale. Bulshadan, waan kaala hadli karnaa Jaén ama Sevilla, laakiin malaha magaalada ugu jacaylka badan waa Granada.
Xaafada Sacromonte, ee Granada
Shaki la'aan, magaaladan Andalusian waa mid ka mid ah kuwa ugu habboon Spain si ay u booqdaan lamaane ahaan. Waxay leedahay meelo badan oo xiiso leh oo safarka Granada u baahan yahay dhowr maalmood. Laakin waa mid aan laga baxsan karin in la booqdo Alhambra, magaalada Nasrid qadiimiga ah ayaa lagu dhawaaqay in ay tahay goobta Dhaxalka Adduunka. Iyo, agteeda, ah Guud ahaan, oo leh qasrigeeda iyo beeraheedii cajiibka ahaa.
Waa inaad sidoo kale ku dartaa socodka xaafadaha ugu caansan booqashadaada Granada. Gaar ahaan, waa inaad aragto Albaicin, oo leh jidad cidhiidhi ah iyo guryo cadcad, iyo Sacromonte, iyo godad ay ku hoyan jireen.
Sidoo kale, waa inaadan ilaawin wax ku saabsan Cathedral of Jidhka, loo tixgeliyey mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee Renaissance Isbaanishka, mana ka mid ah Charterhouse, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin Wadaadka boqortooyada, dhismaha ugu muhiimsan ee Gothic ee Granada.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jirto meel jaceyl ah oo ku taal magaalada Nasrid, waa U fiirsashada Saint Nicholas. Booqo markay qorraxdu dhacdo waxaadna yeelan doontaa aragtiyo cajiib ah oo gaar ah Alhambra. Si aad u soo afjarto booqashadaada Granada, dhadhami qaar ka mid ah tapaskeeda. Dhaqan ahaan, waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan iyadoo la isticmaalayo qaarkoodna waa aubergine shiilan, chopitos, dogfish la marinay ama dunta la shiilay.
Aagagga tapas-dhaqameedka ah waa kan Hoolka Dawladda Hoose, kan laamiga Darro iyo kan Realejo. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan xarumaha martigelinta ee magaalada ayaa bixiya iyaga oo aad u dhadhan fiican leh.
Teruel Town Hall iyo Cathedral
Magaaladan Aragonese, oo xitaa leh halyey la mid ah kan Romeo iyo Juliet, ayaa laga waayay safarkayaga meelaha aan ugu safri karno lammaane ahaan Spain. Waa si sax ah tan Kuwa jecel Teruel, Isabel de Segura iyo Diego Marcilla.
Iyaga, Teruel waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Magaalada Jacaylka Mid ka mid ah booqashooyinka aad ku sameyn karto magaalada Aragonese waxay muujin doontaa si sax ah sheekada Isabel iyo Diego. Waanu kaala hadlaynaa Mausoleum of Lovers, kaas oo, ka sokow qabrigiisa, waxaad arki kartaa bandhig dhan oo la xidhiidha wakhtiga iyo xaaladaha jacaylkiisa aan faraxsanayn.
Laakiin Teruel wuu ka badan yahay kuwa jecel. Dhaxal bay leedahay Mudejar architecture kaas oo lagu dhawaaqay in uu yahay goob Dhaxal-gal ah. Waxay ka kooban tahay, dhismayaal kale, munaaradaha iyo saqafyada Cathedral ee Santa María iyo kaniisadaha San Pedro, San Martín iyo El Salvador. Taas bedelkeeda, biyo-mareenka Los Arcos ee soo rogaya waa Renaissance.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad weli rabto inaad waqti dheer sii safarto, meel u dhow magaalada aad ku leedahay Dinopolis, beerta theme ee loogu talagalay Dinosaur-yada oo deegaanka degganaa waqtiyadii hore.
Ugu dambeyntii, waa inaad booqataa dhaxalka Teruel ee qaab dhismeedka casriga ah. Waxay ka jawaabaysaa, si waafaqsan dhismayaasheeda hore, si ay style neo-mudejar. Waxayna ka kooban tahay dhismayaal sida San Nicolás de Bari, dugsiyadii hore ee Arrabal, guriga Farmashiyaha ee Isbitaalka Gobolka, Casino ama Plaza de Toros.
Laakiin waa inaadan ka bixin magaalada Aragonese adigoon marin si fiican loo yaqaan Torico square. Hareeraha waxa aad ku leedahay baararka iyo makhaayado aad kaga raaxaysan karto cunnooyinka wanaagsan ee Teruel. Dhexdeeda, hamka la daweeyay ayaa soo muuqda, laakiin sidoo kale suxuunta sida wan la dubay, partridge iyo bakayle la shiiday ama tufaax. Iyo, sida macmacaanka, taaha jacaylka ama tidcan Mudejar.
Salamanca, meel kale oo lagu safro sida lamaane oo Spain ku fiican
Huerto de Calixto iyo Melibea
Sidoo kale Salamanca taariikhi ah waa meel ku habboon in lagu safro lamaane ee Spain. Dhab ahaantii, mid kale oo ka mid ah sheekooyinka jacaylka weyn ee suugaanteena ayaa halkaas ka dhacaya. Waxaan kaala hadalnaa waxa ku saabsan Calixto iyo Melibea, laba ka mid ah jilayaasha Celestine. Oo, si sax ah, ee ku xiga buundada Roomaanka iyo derbiyada magaalada waa iyada Balastar khudradda, beer u eg Muslim.
Laakiin Salamanca waxay ku siinaysaa waxyaabo kale oo badan oo aad aragto. Dalxiis kasta waa inuu ka bilaabmaa goobta Plaza Mayor, Habka Baroque oo loo tixgeliyo mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dalkeena. Waa inaad sidoo kale booqataa cathedralkeeda ee magaalada. Midkii hore wuxuu ka yimid qarnigii XNUMXaad iyo Romanesque, halka kan cusub uu yahay Gothic iyo ka XNUMXaad.
Waxaa jira dhismayaal kale oo badan oo diimeed oo qurux badan oo ku yaal Salamanca. Tusaale ahaan, waxaan xusi doonaa kaniisadaha San Marcos iyo kan Ruuxa Quduuska ah iyo kaniisadaha Las Claras, San Antonio el Real iyo San Esteban.
Laakiin sidoo kale waa inaad booqataa Salamanca dhaxalkeeda cajiibka ah ee dhismayaasha madaniga ah. Waxaa ka mid ah mid ka mid ah Jaamacadda iyo kuwa caanka ah Guriga Dhirta. Oo ay la socdaan kuwan, kuwa kulliyadaha iyo daaraha waaweyn ee Monterrey, Anaya, Don Diego Maldonado ama Orellana.
Marka la soo koobo, waxa kaliya oo aan awoodnay in aan xusno qayb yar oo ka mid ah dhaxalka taallo ee Salamanca sababtoo ah aad ayay qani u tahay in ay u baahan tahay in ka badan hal booqasho. Ha iloobin in wacitaanka Old City Waa Goob Dhaxal Adduun.
Haddaan kaala hadalno beeraha geelaWaxaan mar hore ku siin doonaa sabab kugu filan oo aad ku booqato Pontevedra lamaane ahaan. Sababtoo ah ubaxa noocan oo kale ah wuxuu leeyahay resonances jaceyl oo weyn waxaana laga helaa dhammaan jardiinooyinka magaalada, haddii aad booqato xilliga qaboobaha.
Laakiin Pontevedra sidoo kale waa mucjiso weyn. Magaaladeeda hore waa inaad booqataa Basilica ee Santa Maria la Mayor, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad, iyo, aad ugu dhow, Plaza Teucro, oo uu sameeyay daaraha baroque sida Gago, Montenegro ama Pita.
Dhinaceeda, agagaarka Plaza de la Ferrería waa kaniisada San Francisco iyo Kaniisadda La Peregrina. Iyo, in yar ka fog, buundada dhexe ee El Burgo iyo Matxafka Pontevedra, oo leh ururin cajiib ah oo dahabka dahabka ah.
Socod dhex mara xeebta Lérez sidoo kale waa mid jaceyl badan. Oo, haddii aad ka sameyso qaybteeda woqooyi, waxaad ka heli doontaa, marka lagu daro dabeecadda, jasiiradda farshaxanimada, halkaas oo lagu rakibay qorayaasha Galician kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad joogtid parador de turismo, dhisme qarnigii XNUMXaad, oo aad dhex marto Plaza de las Cinco Rúas waxaad gaari doontaa aagga casriga ah laga soo bilaabo magaalada, halkaas oo ay ku yaalaan guryo badan oo qaabkan naqshadeysan ah iyo sidoo kale masraxa Maamulaha. Dhismayaashan waxaa ka mid ah Café Moderno, dhismaha Xafiiska Boosta iyo, ka sarreeya, quruxda badan Qasriga Lourizán.
Hermitage ee San Satio
Soria waxay ahayd magaaladii Antonio Machado ku noolaa sheekadiisa jacayl Leonor Bidix, muuse ​​qaar ka mid ah gabayadiisa waaweyn. Tani waa inay noqotaa sabab kugu filan inaad u doorato meel aad ugu safarto lamaane ahaan gudaha Spain. Dhab ahaantii, The dalxiiska ee San Saturio, halkaas oo hermitage isku magaca ah ku yaal, waa meel ay ka buuxaan jacayl.
Laakiin, marka lagu daro, magaalada Duero waxay sidoo kale ku siinaysaa dhaxal taariikhi ah oo cajiib ah. Waxay leedahay tiro badan Kaniisadaha Romanesque sida kuwa San Juan de Rabanera iyo Santo Domingo. Waxa kale oo ay leedahay Convents Renaissance sida tan Nuestra Señora del Carmen iyo hermitages sida Nuestra Señora de la Soledad.
Si kastaba ha ahaatee, taallada diimeed ee ugu weyn ee Soria waa Co-Cathedral ee San Pedro, taas oo ilaalinaysa qayb ka mid ah kaniisaddii monastic ee asalka ahayd laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Gudaha, waxaad ku arki kartaa altarpieces baroque ah oo qurux badan sida kuwa kaniisadaha San Miguel iyo Santísima Trinidad.
Magaalada Duero waxay sidoo kale leedahay daaro qurux badan sida kuwa tirinta Gómara iyo de los Ríos y Salcedo. Laakiin hantida ugu weyn ee Soria waa burburka Numantia, oo u jira toddobo kiilo mitir. Magaaladii Roomaanka ka hor ee khuraafaadka ahayd waa la qoday oo waa la booqan karaa. Intaa waxaa dheer, qaybo badan oo ka mid ah qaybaha la helay ayaa ku jira Matxafka Numantino.
Kani maaha ka kaliya ee aad ku arki karto Soria. Sidoo kale aad u xiiso badan waa Matxafka Medieval ee San Juan de Duero, oo ku yaal kaniisadda homonymous; Matxafka Cathedral ee Diocesan-Cathedral iyo Guriga Abwaanada, oo ku yaal dhismaha Wareegga Saaxiibtinimada.
Gabagabadii, waxaanu ku tusinay shan kamid ah meelaha loogu safro lamaane ahaan ee Spain. Dhammaantood waxay ku siinayaan geeso jaceyl, dhaxal taallo weyn iyo gastronomy delicious. Laakiin meelo badan oo kale ayaan kaaga sheegi karnaa. Tusaale ahaan, Ronda, Magaalada Malaga ee u gaarka ah oo ahayd xaruntii burcadda iyo goobta sheekooyin jacayl. Ama jasiiradda Ibiza, oo leh gabbaldhacyo cajiib ah. Ama, ugu dambeyntii, qarniyadii dhexe Pedraza, Segovia, iyada oo qalcaddiisa ay ku farxeen laba jacayl oo aan faraxsanayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Meelaha loo safro lamaane ahaan ee Spain
Suxuunta caadiga ah ee Japan